Ukuhwebelana kwembulunga yonke, Amathrendi izifundo
Kusukela ekupheleni kwekhulu elidlule ukuthi waphawula izinguquko phakade sabona emlandweni wamuva, na hhayi Antiga. The Lensimbi Union wenza ngaphandle. Lona umcimbi sisebunyeni, ngoba angikaze a umbuso omkhulu wanyamalala ngendlela ecashile, ngaphandle izimpi noma ekuvukeleni. Kungezwe leli qiniso engavamile, observamos a China, kanye nombono yayo Orthodox wobukhomanisi, bangamukeli umugqa ukuthuthukiswa komnotho ngokusekelwe capitalism. Never pensado, kuleso sikhashana esincane!
Manje, kanye ukufudumala kwembulunga yonke, futhi lezi zinguquko ezihlelekile umongo global, futhi baphawula ukushiswa zigidigidi dollar (Inkinga yezomnotho 2008 futhi komnotho wezwe)!
Akungabazeki, It is a mzuzu esiyingqayizivele emlandweni wesintu.
Yini luzokwenziwa, nalezi izenzakalo?
Okokuqala, akukho okuphakade.
Second, Kufanele ube nombono ebanzi futhi zimo esizayo ngaphandle zokuhaha iyasebenza nezithakazelo amaqembu athile kwezomnotho, ezombusazwe noma izifunda kanye ucabange global and senze global, noma isizukulwane esilandelayo ngeke abe zomhlaba ukuba baphile.
Okwesithathu, izimakethe zidinga Akungabazeki ukulawula, naphezu amanxusa amaningi futhi "izimboni" do "imali kalula" bengavumelani. Nokho, isidingo control esinjalo asisho ukuthi akudingeki ulungisisa izaba kazwelonke noma komphakathi imali kakade ihlelwe for ukuhweba emakethe evulekile. The kumele State, njengoba kuchaziwe emithethwenisisekelo, Isenzo Order njengoba Regulator, Justice and ukulondolozwa kanye nenhlonipho of Amalungelo ngamunye. Yini kuyabonakala namuhla, ukungabi oda, Justice and Inhlonipho.
Room, khumbula isu eziyisisekelo, usebenzisa isifaniso, never ubeke konke amaqanda akho kubhasikidi owodwa, okungukuthi, hhayi ukusebenzisa konke ukubhuka kwelinye emnothweni, emakethe noma ingemuva.
Fifth, A olinganiselayo amandla global (kwezomnotho, zezombangazwe nezempi) Kubalulekile yeningi global futhi zokunciphisa ukungalingani. Ayikho indawo for radicalism noma hegemonic izikhundla. Uma kukhona iqhaza ezibanzi ukuvumelana emzaneni global, inqubo emuva nkinga esibhekene nayo manje global kuzothatha isikhathi eside futhi ukulahlekelwa kanye nezenzakalo kwezomnotho kanye engathandeki social, kokubili athuthukile kanye asathuthukayo.
Sixth, IZWE kwemvelo njalo kanye nenguquko, akukho static, akekho enelungelo iqiniso noma nje indlela efanele yokwenza izinto, ngamaqembu kanye nokuzibophezela, namuhla, It kuswelekile kunanini. The nokuqaphela khona kanye nolwazi namasiko ehlukene kanye namasiko kubalulekile ukuze senze futhi uxhumana omhlaba kanye nabasebenzi.
Seventh, nsuku zonke olufundayo!
Yesishiyagalombili, njengoba eliphezulu iphuzu odlule, lokhu uhide.
← Networks Social and Business Development
Cradle ukuba Cradle – Cradle ukuba Cradle Design →